कोरोना संक्रमितले अक्सिजनको मात्रा घटे के गर्ने ? – Nepal Press
कोरोना संक्रमितले अक्सिजनको मात्रा घटे के गर्ने ?
२०७८ जेठ ११ गते १०:४९
कोभिड–१९ को दोस्रो महामारीमा संक्रमितहरूमध्ये अधिकांशलाई अक्सिजन आवश्यक पर्‍यो । समयमै अक्सिजन नपाउँदा धेरैको ज्यान समेत गुम्यो । डाक्टरहरूका अनुसार धेरै बिरामीको मृत्यु हुनुमा अन्तिम चरणमा अस्पताल ल्याएपछि यस्तो अवस्था आएको हो ।
त्यसमाथि पर्याप्त स्वास्थ्य उपकरणको अभावका कारण अस्पतालले बिरामीलाई भर्ना समेत लिने अवस्था यो बीचमा देखा परे । संक्रमित होम आइसोलेसनमा बस्दा आफ्नो अक्सिजन घटेको थाहा नभएकै कारण पनि क्रिटिकल अवस्था आएको जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. सुजनबाबु मरहट्ठा बताउँछन् ।
यसर्थ अक्सिजन लेभल घटेको संक्रमितले कसरी थाहा पाउने ? घटिहालेमा के गर्ने ? कस्तो अवस्थामा अस्पताल लैजाने ? यसबारे डा मरहट्ठासँग नेपालप्रेसले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश
कोभिड-१९ले फोक्सोमा संक्रमण गर्छ । फोक्सोले अक्सिजनबाट शरीरका विभिन्न भागमा जुन अक्सिजन सप्लाइ गर्ने क्रिया हुन्छ, अक्सिजन सप्लाइ हुने फोक्सोको संक्रमणका कारण फोक्सो कम्प्रोमाइज हुन्छ ।
कम्प्रोमाइज भएपछि बिरामीलाई पूर्व जानकारी हुन्छ । तर यो कोरोना इन्फेक्सनमा फोक्सो संक्रमण एकदमै उच्च भइरहँदा पनि बिरामीको जानकारीमा हुँदैन । यसको लागि कोरोना संक्रमित भएका कोही पनि बिरामी होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ भने उहाँले आफ्नो अक्सिजन अक्सिमिटरबाट नियमित रुपमा मनिटर गर्नुपर्छ ।
९० भन्दा माथि अक्सिजन स्याचुरेसन हुँदा त्यतिधेरै खतरा हुँदैन । जब ९० भन्दा अक्सिजन स्याचुरेसन घट्न थाल्छ त्यसपछि विस्तारै खतराको घण्टी निम्त्याउँछ । यसर्थ घरमा बस्दा सबै बिरामीलाई गाह्रो भएको महसुस नहुन सक्छ ।
तर नियमित रुपमा अक्सिजन स्याचुरेसन ठीक छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ ।
हामीमा घरमै अक्सिजन दिनसक्ने अवस्था धेरैमा छैन । संक्रमणको कतिपय अवस्थामा अक्सिजनको चाप भए पनि घरमै अक्सिजन लिएर बसेको पनि देख्यौं । तर त्यसैको भरमा मात्र पनि भएन । हामी यो रोगलाई ह्याप्पी हाइपोसिया भन्छौं ।
अक्सिजनको लेभल घटिसकेको हुन्छ तर बिरामीलाई थाहा हुँदैन । कतिपय बिरामी घरमा ठीक जस्तो देखिए पनि अचानक गाह्रो भएर अस्पताल लाँदा लाँदै भेन्टिलेटरमा राख्नु परेको वा मृत्यु भएको हामीले भोग्यौं ।
नियमित रुपमा शरीरमा अक्सिजनको आवश्यकता हुन्छ । संक्रमितलाई अक्सिजन मात्रा घट्दै गयो भन्नुको मतलब यसले फोक्सोमा संक्रमण गरेको भन्ने बुझिन्छ । त्यसैले यसलाई ढिलाइ गर्नै मिल्दैन ।
समयमै अक्सिजन दिन नपाइएको अवस्थामा वा अक्सिजन घटिहालेको अवस्थामा फेरि आतिनुभने हुन्न । आतिनाले झन् ठूलो समस्या निम्त्याउँछ । यदि अक्सिजन घटेको अवस्थामा तत्काल अक्सिजन दिन नपाउँदा घोप्टो परेर सुत्दा केही मात्रामा अक्सिजन बढाउन सक्छौं । तर त्यो एकदमै क्षणिक हो । बरु अक्सिजन आपूर्तिमा कसरी सहजता अपनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा ख्याल राख्नुपर्छ ।
हामीले पहिलो संक्रमणकै बेलामा पनि संक्रमण बढ्दै जाँदा अक्सिजन आवश्यक चाहिन्छ भन्दै आएमा थियौं । अक्सिजन भनेको हाम्रो लागि अत्यावश्यक हो । यसको अर्को विकल्प पनि छ्रैन ।
डर त्रासले पनि बढी अक्सिजनको आवश्यकता हुनसक्छ । किनकि श्वासप्रश्वास छिटो हुने हुन्छ । डरले झन् अक्सिजनको आवश्यकता बढाइदिन्छ । त्यसकारण बिरामीलाई डर त्रास हुन नदिनका लागि सकारात्मक बनाउनुपर्छ ।
प्रकाशित: २०७८ जेठ ११ गते १०:४९